1 gore 1 mwedzi wapfuura #1104 by alogie
Ndaida kungozvizivisa. Zita rangu ndiAlistair uye ndinogara kuNorthern California. Ini ichangobva kudzokera ku simming uye ndakatenga P3Dv4. Pane tine ye freeware kunze uko, asi kuwirirana ne v4 kunogona kuva kwakaoma kuziva kune dzimwe nzvimbo. Ndinofarira chokwadi chekuti Rikoooo yakakanganwa ndeyezvinyorwa zvinogadziriswa kuitira kuti ini handifaniri kunetseka nezvekuvhiringidza maitiro, majiji kana mapepa anonzwika nezvimwewo. Kukwanisa kubvisa tsvina zvakare ibhonasi. A jumbo kubhadhara kwakanga kusina-brainer.
Ndinonakidzwa nekubhururuka kwemajetti ekutengeserana uyewo zviduku zvishoma uye jets. Kugara kwangu mujetsiti dzekutengesa hakusi kushanda zvakanaka, saka ndinoda tsika.
Ndinoda zvishoma kubhabhatidzwa saka ndakawedzera:
uye nokuda kwenzvimbo yacho:
Vhura LC Europe, NA uye SA
Ndine uwandu hwekare hunotenderera kune Core i5-2500k quad core. Sezvo ndakatenga, ndakagadzirisa RAM kune 16GB, ndakamisa SSD ye OS uye yeSD yakatsaurirwa yemitambo, uye ndakawedzera GTX 1050 Ti kadhi. Izvo zvinoita zvakanaka pane yangu yekare 1680 x 1050 kuona.
Nokuda kwekuita simming ini ndine TrackIR 5 uye HOTAS Cougar (isina-modded kunze kwekugadziriswa mubhodhi mu throttle) uye kumhanya kweTTMaster.